Email ROI: Enweghị Brainer maka Corporationlọ Ọrụ buru ibu | Martech Zone
Monday, August 13, 2007 Tuesday, July 15, 2014 Douglas Karr
Anyị nwere nzukọ dị egwu na ụlọ ọrụ mba taa ma kwurịta itinye usoro mmemme email. Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ndị ahịa 125,000 na mba niile, ndị ahịa 4,000… na enweghị usoro email. Ha nwere 8,000 ngwaahịa na 40 ma ọ bụ 50 ọhụrụ ngwaahịa kwa ọnwa na-emepụta na-anwụ n'ihi na ha na-ere. Ha na-echegbu onwe ha banyere -eri nke mmemme email ọ bụ ezie na ha na-eche ebe ego ga-esi bịa.
Nke a bụ otu n'ime mmekọrịta ndị ahụ m chọrọ ka m tinye ọnụ na-akwụghị ụgwọ ọ bụla ma kwụọ ụgwọ ọrụ!
N'ihe atụ dị n'elu, ana m eche na ha nwere ike ịnweta adreesị ozi-e nke 1 n'ime ndị ahịa 3 ọ bụla site na njedebe nke afọ. N'ikwu eziokwu, mmemme ahụ kwesịrị ịmalite ọtụtụ mmasị na ọtụtụ ozi ịntanetị, mana achọrọ m ịnọ n'akụkụ nchebe. Ana m eme atụmatụ 1 email kwa ọnwa - ọ bụghị kwa izu. Onye ọ bụla na-azụ ahịa na-azụrịrị ihe kwa ọnwa, yabụ email ahụ n'ezie iji gbalịa ịbawanye ahịa sitere na ndị ahịa dị ugbu a. M tụbara na nzaghachi azịza 0.75% dị nro na nkezi (mgbanwe dị ukwuu) $ 5 na mgbakwunye mmefu. N'ihi na Email Na-eweta, M kwukwara $ 0.03 kwa email… na elu n'akụkụ.
Site na atụmatụ ndị a niile, mmepụta ka bụ ihe ịtụnanya 25% Laghachi na ntinye ego. Tụkwasị na nke a, email ga-ebugharị iwu ndị ọzọ site na saịtị ecommerce ha - na-echekwa iwu na-ezighị ezi na ụgwọ ọrụ mmadụ. Ọzọkwa, ebe ndị na-ere ha na-erugharị ntakịrị maka nlebara anya, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ree ohere mgbasa ozi kachasị elu na akwụkwọ akụkọ ha! M nyochaa ego mgbasa ozi na otu ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ taa na nkezi mgbasa ozi bụ $ 0.02 kwa email ma enwere ebe 4 na akwụkwọ akụkọ ọ bụla.
Na-ere 4 tụrụ na onye ọ bụla email ga-inupụ ROI elu nke 300%!
Ekwenyesiri m ike na ha ga-achọpụta otú ha ga-esi nweta ego a.
Tags: ọnụahịa nke onye debanyere ahalaghachi na ulo oru mboenterpriselaghachi azụmaahịaInye ego kwa emaildebanyere aha uru